10ka Nalalka Ugu Xiisaha Badan Todobaadka Naqshadeynta Milan | Abuurista khadka tooska ah
10ka nal ee ugu xiisaha badan isbuucii nashqadeynta magaalada Milano
Melisa Perrotta | | Fanaaniin, Design Graphic, Dhiirrigelinta
La Toddobaadka Naqshadeynta Milan Waxaa lagu sifeeyay inay tahay dhacdo isu keenta nashqadeeyayaasha caalamiga ah ee ugu wanaagsan bandhigyada, bilaabista iyo soo bandhigista muddada usbuuca ah.
Sannadkan dhacdadu waxay ka dhacday Abril 17 ilaa 22 magaaladaas. Dhexdeeda, waxaad ku arki kartaa isbeddellada cusub ee bilaabaya inay galaan bartamaha adduunka ee naqshadeynta gudaha. Gaar ahaan Naqshadeynta nalka ayaa soo bandhigay nashqado aad u xiiso badan oo soo jiitay dareenka Hoolka alaabta guriga.
Tani waa sida badan naqshadaha nalalka aad u asalka ah ku raran qaabkaas casriga ah ee aan ku aragnay bandhigyadii ugu dambeeyay. Dareenkan, shaqooyinka ayaa la soo bandhigay oo muujinaya fikradaha Surrealist iyo dadaist aad loogu calaamadeeyay sida nalka toosan ee ka laalaada gacmo gashi, siddooyin ama moobiil muraayadaysan.
Halkan waxaan ku tusaynaa nalalka ugu fiican. Wixii booqo bogga naqshadeeyaha ama fiiri aruurinta oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad gujiso cinwaanka.
1 Ama Elemental
2 Moirai Candlestick waxaa qoray Ini Archibong
3 Laydhka Aurora ee Lee Broom
4 Muuse by Studio Design Note
5 On Khadadka by Jean Nouvel
6 Filation by Mayice Studio
7 Padirac waxaa qoray Eric Schmitt
8 1.625m / s2 waxaa qoray Hiroto Yoshizoe
9 Nalalka Xi ee Neri & Hu
10 Lucy Take Five waxaa qoray Ingo Maurer
Laydhka O waxaa abuuray Alejandro Aravena madaxa Elemental, shirkadda dhismaha ee Chile; waxaa bilaabay shirkadda Artemide. Sheygan farshaxanimadu waa a nal dibedda aad u shaqeeya kaas oo doonaya in lagu yareeyo kharashka tamarta iyada oo loo marayo dareemayaal dhaqdhaqaaq oo daaraya ama dansan.
Moirai Candlestick waxaa qoray Ini Archibong
Shumaca Moirai waa a meydad midabo badan dhigay laga abuuray muraayadda gacanta lagu afuufo. Markii la isu geeyo waxay samaystaan ​​waxa naqshadeeye ugu yeeray "Xiddigta daruuraha." Qalabkani waa qayb ka mid ah "Xagga Cirka Hoose" Ururinta loogu talagalay astaanta alaabta guryaha ee London Isaga
Laydhka Aurora ee Lee Broom
Aurora waa a naqshadeeye balaaran oo loogu talagalay by Lee Broom. Qaybtan naqshadeynta mustaqbalka ee ka kooban nalalka LED-ka waxaa lagu waafajin karaa iyadoo la helo qaabab iyo cabbirro badan.
Muuse by Studio Design Note
Istuudiyaha Naqshadeynta Naqshadeynta ee Barceona ayaa tan abuuray laambad jilicsan oo loogu talagalay nooca Vibia. Waxaa lagu heli karaa 3 nooc oo kala duwan iyo caddaan, salmon ama cawl.
On Khadadka by Jean Nouvel
On Khadadka waxaa lagu sharaxay abuuraha sida "Ciyaar fudud oo sax ah oo sagxad midab leh". Shaqadan waxaa laga abuuray taxane ah oo afar geesood ah iyo qaabab afar gees leh. Iyaga wuxuu ka doonayaa inuu u ekaysiiyo laydhadhka cirka ee magaalooyinka.
Filation by Mayice Studio
Filamento waxaa abuuray istuudiyaha Mayice ee fadhigiisu yahay Madrid. Kuwani naqshadeeyayaasha hal-abuurka ah waxay ku guuleysteen inay laambad ka abuuraan hal feyl oo iftiin ah oo ku dhex jira qaab dhismeedka muraayad wavy afuufayaa.
Padirac waxaa qoray Eric Schmitt
Naqshadeeye Eric Schmitt ayaa tan abuuray laambad asal ah oo ka kooban laba walxood; hal dhinac, mid sudhan; kan kalena, mid dhulka ku tiirsan. Labadaba waxaa loo isticmaali karaa labadaba iswaafajin iyo gooni gooni.
1.625m / s2 waxaa qoray Hiroto Yoshizoe
Laydhkan wareega ee Hiroto Yoshizoe ayaa baadha xiriirka qorraxda iyo dayaxa iyada oo loo marayo diiradda dhexe ee iftiimaya iftiinka ka muuqda muraayadaha hareeraha.
Nalalka Xi ee Neri & Hu
Laydh kaa doonaya inuu kaa dhigo dareema iftiinka subaxda waxaa sameeyay istuudiyaha Neri & Hu. Nalkan qaabka bariga ah waxaa sameeyay Poltrona Frau oo leh muraayad la afuufay iyo xargaha maqaarka.
Lucy Qaado Shan Ingo Maurer
Lucy Take Five waa laambad aan caadi aheyn oo ku filan in la iska indhatiro. Naqshadeeyaha Jarmalka Ingo Maurer waxaa ku dhiirrigeliyay astaamaha Yves Klein midab buluug ah oo loogu talagalay naqshadeynta gacmo gashi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 10ka nal ee ugu xiisaha badan isbuucii nashqadeynta magaalada Milano
Guusha 6 istuudiyo naqshadeeye madaxbannaan